Global Voices teny Malagasy » Shina : Manetsika ny reny hitaky ny sivana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Febroary 2010 21:54 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Tanora, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta
Nametraka fikambanana antsoina hoe Neny Mpitsara (Mama Jury) ny Fikambanan'ny media an-tserasera any Beijing  tamin'ny 19 Janoary 2010 hanivana ny vaovao mamoha fady sy vetaveta an-tserasera. Ny tatitra nataon'ny Southern Weekend  moa no nametraka fa avy tany amin'ny firenena tandrefana no niaingan'ny hevitra hikambanan'ny reny “hiaro” ny ankizy tsy hahita vetaveta. Nefa ny fikambanan'ny reny Shinoa dia natsangan'ny sampan'ny Antoko komonista shinoa fa tsy mba najoron'ny fikambanana mpiaro ny olompirenena (sivika) tsy miankina tahaka izay misy any amin'ny tany tandrefana.
Manontany  ny maha-ara-dalàna ny “fomba fiaraha-miasan'ny fikambanan'ny reny sy ny fitondrana” i Yang Heng Jun:
Hu Yong niditra lalina kokoa  tamin'ny hevitr'i Yang:
Maro amin'ny olona no miahiahy fa hiaka politika fihatsarambelatsihy hametrahana ny sivana amin'ny aterineto “ny mahasoa ny ankizy no voalohandaharana”. Tsy mba eny amin'ny ankolafin'ny ray aman-dreny sy ny zanakamanko ny fitondrana rehefa miatrika adihevitra tena izy, tahaka ny raharahan'ny ronono misy poizina melamine. Navoitran'i Chang Ping fa nosamborina tamin'ny volana novambra 2009 ilay ray , Zhao Lianhai, izay nanao fanadihadiana momba ity ronono voapoizina melamine ity. Tsapan'i  Chang Ping indray hoe nahoana moa ireto reny manohana ny sivana izay mitabataba ho tia ny zanany ireto no tsy hita nanohana an'i Zhao? Ary ny toa tena fanesoana, ilay filohan'ny filankevi-pitantanana manara-maso ny dion'ny sakafo (AQSIQ), Li Changchun, izay nametra-pialana noho ny raharaha ronono voapoizina iny dia notendrena ho filohalefitry ny ekipa miasa hanohitra ny vaovam-“betaveta” sy tsy manara-dalàna (an-tserasera).
Niara-nampiaka-peo tamin'i Chang Ping i Laotuzaizi ary nanolo-kevitra fa tokony hisokatra ho amin'ny fitarihan'ny “reny” ny governemanta :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/02/23/5101/
 Fikambanan'ny media an-tserasera any Beijing: http://baom.sina.com.cn/3/2009/0616/2386.html
 niditra lalina kokoa: http://huyong.blog.sohu.com/144570910.html
 tokony hisokatra ho amin'ny fitarihan'ny : http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ac981db0100gw90.html